सविताको बुवा आमाकै अगाडीबाट सन्तोष देउजाले लगाए भोजहरि ढकाललाई फोन ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 15, 2021 AdminLeaveaComment on सविताको बुवा आमाकै अगाडीबाट सन्तोष देउजाले लगाए भोजहरि ढकाललाई फोन ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यसै बीच सबिताका बहिनि र आमा बुबा आफन्त सहित पत्रकार सन्तोष देउजाको घरमा गएर केहि गम्भीर प्रश्नहरु सोधेका छन। त्यस्तै सन्तोष देउजाले सविताको आमा बुबाको अगाडी नै फोन गरेर केहि गम्भीर प्रश्न सोधेका छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः
सबिता मृत्यु प्रकरणबारे आफ्नो भिनाजु र आमाजूले बोलेको कुराको जवाफ दिन आइन बहिनि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
छोराले सडकमा अलपत्र पारेर भागेपछि करोडपति आमाको सडकमा बास, रुँदै आइन मिडियामा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)